Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray Dhuusa-Mareeb & Odayaal cabasho muujinaya.
DHUUSA(P-TIMES) – Madaxweynaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdllaahi Farmaajo ayaa gaaray magaalada Dhuusa-Mareeb, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen bulshada magaaladaas ,waxaana uu soo xirayaa kulanka Dibu heshiisiinta Galmudug oo uu horey u furay wasiirkiisa koowaad Xassan Cali Kheyre.
Guddiga Dibu heshiisiinta Galmudug oo ay horey u magacowday dawladda Faderaalka ayaa lahaa qabanqaabada shirkan, waxayna maalmihii uu socday bulshada la wadaageen arrimo kala duwan, balse ma jirin arrimo dhaqan oo ay gudaha u galeen dhinacyadu.
Colaado Sokeeye oo ka jiray gobalkan qaarkood ayaa heshiis laga gaaray oo ay xalisay Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya, laakiin tabashada beelaha ee hanaanka qeybsiga Xildhibaanada walaac kale ayaa ka taagan.
Madaxweyne Farmaajo wuxuu wajahayaa caqabad culus oo ah mid u muuqata in uu ka siibtay Wasiirkiisa koowaad Xassan Cali Kheyre oo bilowgii howshan bilaabay.
Waa safarkii 3aad ee Madaxweynuhu ku tagayo Galmudug, tan iyo markii uu xilka qabtay, waxaana lafilayaa in uu la kulmo odayaasha dhinacyada cabashada muujinaya oo ay ka wada hadleen sidii xal rasmi ah loo gaari lahaa.
Ahlu Suna oo doonaysa in ay Xildhibaanada ku qaadato habka awood qeybsiga Siyaasiga ah, tanni waa caqabad weyn oo ku horgudban arrimaha qeybinta Xildhibaanada Galmudug, weyna adag tahay in uu si fudud uga gudbo Madaxweyne Farmaajo.